कोरोना महामारीका बेला मधुमेहका बिरामीले कसरी ख्याल गर्ने ? यस्तो छ डा ज्योतिको सल्लाह - Health TV Online
डा. ज्योति भट्टराई 373 Views
कोरोना महामारीका बेला मधुमेह रोगको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हेल्थ टिभी अनलाइनले वरिष्ठ हर्मोन तथा मधुमेह रोग विशेषज्ञ डा ज्योति भट्टराईसँग कुराकानी गरेको छ । यस विषयमा उनले दिएको सल्लाह र सुझाव उनकै शब्दमा :
कोरोना महामारीका बेला दीर्घरोग भएका अन्य बिरामीलाई झनै समस्या थपिएको छ । यो बेला सिंगो देश नै कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न तल्लीन भएकाले अन्य रोगका समस्या छायाँमा परेका छन् यो स्वभाविक पनि हो । तर सबै खालका रोगको उपचार यो बेलामा पनि छुट्नु हुँदैन्। अन्यथा यसले अन्य दीर्घ रोगको जटिलताले निम्त्याउने महामारी भविष्यमा फेरी थेगिनसक्नु हुनसक्छ ।
कोरोनासँगसँगै मधुमेह, क्यान्सर, मुटुरोग लगायतका दीर्घ समस्या भएकाले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । मधुमेह भएका बिरामीले कोरोना महामारी छ भनेर औषधि खान छोड्ने हो भने यसले झन खतरापूर्ण अवस्था सिर्जना गर्छ । त्यसैले आफूलाई पहिलयैदेखि भएको रोगको व्यवस्थापन गर्न पनि जरुरी हुन्छ ।
कोरोना भाइरसको जटिलता र मृत्युदर मधुमेह रोग भएका व्यक्तिहरुमा बढी हुने कुरा त विभिन्न अध्ययनहरुले पुष्टि नै गरिसकेका छन्। मधुमेह भएका व्यक्तिहरुमा रोगसँग लड्नसक्ने रोग प्रतिरोधि क्षमता कम हुन्छ । जसले गर्दा कोरोना मात्र हैन जुनसुकै भाइरसले यस्ता बिरामीलाई छिटै आक्रमण गर्न सक्छन् भने छिटै असर पुराउने गर्छन्। त्यसैले पनि मधुमेहका बिरामी कोरोना महामारीमा अझ बढी सतर्क हुनुपर्छ ।
सबैलाई थाहा छ चिनी रोग मानिसको रगतमा चिनीको मात्रा आवश्यकताभन्दा बढी भएर हुने रोग हो । यो सम्पूर्ण रुपमा निको पार्न सकिने रोग होइन्। यसलाई औषधि र खानपान मिलाएर नियन्त्रण मात्र गर्ने हो । त्यसैले यसको औषधिको मात्रा मिलेन वा खानपानमा तलमाथि भयो भने धेरै नै दुख दिने रोग भएकाले यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । अन्यथा कोरोना त छँदैछ मधुमेहले झन बढी क्षति पुराउन सक्छ ।
अर्को कुरा नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहरमा संक्रमितमा बढी जटिलता देखियो । जसका कारण धेरै संक्रमितमा ‘स्टेरोइड’ औषधि चलाएको पाइन्छ । स्टेरोइडले सुगरको मात्रा ह्वात्तै बढाउने गर्छ । त्यसो त चिकित्सकले नै यो औषधि दिने बेलामा सुगर बढ्न सक्छ मोेनिटर गर्नुहोला भन्ने गरेका छन्। तर सबैले राम्ररी नबुझ्दा स्टेरोइडका कारण सुगर धेरै नै बढेर जटिल अवस्थामा पुग्नसक्ने खतरा बढ्ने गर्छ । कोरोनाबाट बच्नका लागि चलाइएको स्टेरोइडले तपाइँको जीवन नै खतरामा हुनसक्छ । यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ । यसको मतलब स्टेरोइड नचलाउने भनेको हैन् । मानिसको जीवन जोगाउनका लागि औषधि त चलाउनैपर्छ तर पहिल्यै सुगर भएको बिरामीले यस्ता कुरा बुझेर आफनो डाक्टरसँग सल्लाह लिएर मात्र औषधिको सेवन गर्दा जटिलताबाट बच्न सकिन्छ ।
मधुमेह यस्तो रोग हो जसले अन्य महत्वपूर्ण अंगहरुमा असर गरेर बिरामीको जिवन कठिन बनाउने मात्र हैन् मृत्युसम्म गराउन पुग्छ । कोरोना भाइरसको जटिलता र मृत्युदर मधुमेह रोग भएका व्यक्तिहरुमा बढी हुने कुरा त विभिन्न अध्ययनहरुले पुष्टि नै गरिसकेका छन्। मधुमेह भएका व्यक्तिहरुमा रोगसँग लड्नसक्ने रोग प्रतिरोधि क्षमता कम हुन्छ । जसले गर्दा कोरोना मात्र हैन जुनसुकै भाइरसले यस्ता बिरामीलाई छिटै आक्रमण गर्न सक्छन् भने छिटै असर पुराउने गर्छन्। त्यसैले पनि मधुमेहका बिरामी कोरोना महामारीमा अझ बढी सतर्क हुनुपर्छ ।
अर्को कुरा नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहरमा संक्रमितमा बढी जटिलता देखियो । जसका कारण धेरै संक्रमितमा स्टेरोइड औषधि चलाएको पाइन्छ । स्टेरोइडले सुगरको मात्रा ह्वात्तै बढाउने गर्छ । त्यसो त चिकित्सकले नै यो औषधि दिने बेलामा सुगर बढ्न सक्छ मोेनिटर गर्नुहोला भन्ने गरेका छन्। तर सबैले राम्ररी नबुझ्दा स्टेरोइडका कारण सुगर धेरै नै बढेर जटिल अवस्थामा पुग्नसक्ने खतरा बढ्ने गर्छ । कोरोनाबाट बच्नका लागि चलाइएको स्टेरोइडले तपाइँको जीवन नै खतरामा हुनसक्छ । यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ । यसको मतलब स्टेरोइड नचलाउने भनेको हैन् । मानिसको जीवन जोगाउनका लागि औषधि त चलाउनैपर्छ तर पहिल्यै सुगर भएको बिरामीले यस्ता कुरा बुझेर आफनो डाक्टरसँग सल्लाह लिएर मात्र औषधिको सेवन गर्दा जटिलताबाट बच्न सकिन्छ । अहिले कोरोना संक्रमित जसको अक्सिजन लेबल कम छ उनीहरुलाई धेरै नै स्टेरोइड चलाएको पाइएको छ । यसको असर अहिल्यै नदेखिए पनि उनीहरुलाई दीर्घ असर देखिनसक्छ। । अहिले म कहाँ आउने स्टेरोइड चलाएका संक्रमित जो पहिल्यैदेखि मधुमेहका बिरामी थिए उनीहरको सुगर बढेर अनियन्त्रित भएर आउनेहरु बढिरहेका छन्। त्यसैले सबै मधुमेहका बिरामीले संक्रमणमा परेपछि त झनै चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ ।
यतिबेला लकडाउनका कारण अहिलेको सबैको दिनचर्या घरमै बस्ने खाने बनेको छ । यस्तो बेलामा मोटाउने, व्यायाम नपुग्ने हुँदा झन समस्या थपिनसक्छ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा मधुमेहका बिरामीले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्दै प्रत्येक दिन अनिवार्य व्यायाम गर्नुपर्छ । घरमै टहलिने, नाचगान गरेर मांशपेशी चलायमान गर्न सकिन्छ । बिहान साँझ कम्तीमा ३० मिनेट यताउता हिड्डुल गर्नुपर्छ । यसो गरेमा शरीर छरितो हुनुका साथै शरीरमा चिनीको मात्रा बढ्न पाउँदैन । मधुमेहका बिरामीले व्यायामको साथै खानपानमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । कोरोना छ भनेर सबै कुरा व्यवास्ता गर्न मिल्दैन्।
स्टेरोइड चलाएका मधुमेहका बिरामीले अनिवार्य आफनो नियमित डाक्टरको सल्लाह र परामर्श गरेर औषधि तलमाथि गर्दा समस्या आउनबाट बच्न सकिन्छ । कतिपय बिरामीलाई इन्सुलिन नै दिनुपर्ने समेत भएको छ । त्यसैले कुनै पनि औषधिको सेवन गर्दा डाक्टरको सल्लाह लिन नभुल्नुस् ताकी पछि पछुताउन नपरोस। योसँगै अहिले ब्ल्याक फंगसको पनि निकै खतरा बढेको छ । यो समस्या पनि मधुमेह भएकामा बढी देखिएको छ ।
मधुमेह रोग भएकाले के बुझ्नु पर्‍यो भने म सबै रोगको उच्च जोखिममा छु भन्ने कुराको हेक्का राख्न जरुरी छ । साथै नियमित व्यायाम गर्ने, तनाव नलिने, औषधिको सेवन समयमै गर्ने र डाक्टरको सल्लाह लिने गरेमा धेरै जटिलता हुनबाट बच्न सकिन्छ ।